Sida loogu wareejiyo WhatsApp chats ka iPhone ilaa Android ama qeybsanaan | Wararka IPhone
Ignacio Sala | | Android, Casharrada iyo buugaagta
Labada macruufka iyo Android labadaba waxay na siinayaan ikhtiyaarro badan si aan uga fogaano xogta luminta illaa iyo inta aan ku suganahay isla barxadda. Kaydinta ku jirta iCloud ama koontadeena Google waxay ka dhigeysaa mid ka socda mid Android ah ama mid iPhone ah mid kale waa ciyaar cunug iyo inaanan lumin dhammaan waxyaabaha ay tahay in taleefannadeennii hore ay sii wadi karaan mid cusub sida hadaan waxba dhicin. Laakiin ¿maxaa dhacaya markaan rabno inaan ka tagno iPhone illaa Android ama ka socda Android illaa iPhone?
Xaaladdan oo kale isbeddellada isbeddelku. Codsiga laga hadlayo wuxuu lahaan karaa adeegeyaal u gaar ah si uu u kaydiyo xogta iyo inuu la jaan qaadayo labada Android iyo IOS labadaba, sida ku dhacda Telegram, ka dibna isbadalku wuxuu noqon doonaa mid aan la dareemi karin, laakiin hadii kale, sida WhatsApp, xaqiiqadu waxay tahay in ay adkaan doonto in aan lumin dhamaan wada sheekaysigeena iyo sawiradeena marka aad ka soconeyso IOS ilaa Android ama taa bedelkeeda. Laakiin waxaa jira siyaabo lagu gaaro oo halkan waxaan kuu sheegeynaa midka ugu toosan uguna fudud.
Nidaamka wareejinta sheekooyinka WhatsApp ee ka socda iPhone-ka illaa Android, ama taa beddelkeeda, waxay noqon kartaa mid aad u yar ama ka yar, oo ku xiran codsiga aan isticmaalno. Ragga ku nool Tenorshare waxay gacanta noo geliyeen arjiga iCareFone, oo ah codsi, marka lagu daro noo oggolaanshaha ku wareeji xogta WhatsApp hal madal moobiil mid kale, waxay kaloo noo ogolaaneysaa inaan sawirrada ka soo qaadno iPhone-keena, iPad-ka ama iPod taabashada aan ugu wareejino kumbuyuutarkeena marka lagu daro iTunes, nuqul muusig, buugaag iyo sawirro aaladdayada, tirtirno codsiyada ... dhammaantood adigoon isticmaalin iTunes waqti kasta.
Ka gudbinta xogta WhatsApp-kaaga iPhone-ka ama taleefanka gacanta ee 'Android', iyadoo 'iCareFone' ay tahay mid aad u fudud (muhiim ah) isla markaana ah dhaqso dhaqso ah (tallaabooyinka la raacayo), maadaama muddada ugu dambeysa ay ku xirnaan doonto qadarka sawirrada iyo fiidiyowyada aan ku keydinnay koontadayada WhatsApp ee aaladdayada. Nidaamka waa isku mid labadaba nidaamyada hawlgalka.
Markaanu socodsiino arjiga iCareFone, waa inaan ku xirmaan labada qalab, isha iyo halka loo socdo kombiyuutarkayaga iyo iyada oo loo marayo arjiga xulashada kaas oo noqon doona isha xogta (laga helayo terminaalkee aan dooneyno inaan ka soo saarno xogta) iyo boosteejada loo socdo (terminal-ka aan dooneyno inaan nuqul ka dhigno). Marka la aasaaso, guji Transfer (kiiskeena, waxaan u wareejineynaa wada sheekaysiga WhatsApp ka iPhone 6s ilaa Samsung Galaxy).
Markaan riixno badhanka Wareejinta, arjiga ayaa daryeelaya nuqul ka samayso dhammaan xogta kombiyuutarkayaga, oo ay ku jiraan dhammaan lifaaqyada waxayna abuuri doonaan feyl soo celin ah oo soo celin doona, cafiyi karaya, qalab bartilmaameed.
Sidaan uga faallooday tuducyadii hore, waxay kuxirantahay macluumaadka aan ku hayno nuqulkeena WhatsApp, howshu waxay qaadan kartaa waqti badan ama kayar. Inta hawshu socoto oo dhan, Waa inaanu ka jarin mid ka mid ah boosteejooyinka kumbuyuutarka taasi waa qeyb ka mid ah howsha haddii aanan dooneyn in howsha aan si sax ah loo fulinin.
iCareFone waa la heli karaa labadaba Windows sida loogu talagalay macOS.
Si loo fuliyo hawshan cakiran waxaan ka heli karnaa habab aad u kala duwan internetka, badankooduna aad ayey u dhib badan yihiin mana shaqeeyaan, ama xaaladaha ugu fiican waxay kaliya qayb uun ku sameeyaan. Dhammaan xulashooyinka la isku dayey, midka aniga isiiyay natiijooyinka ugu fiican wuxuu ahaa codsiga Windows iyo Mac «dr. fone »iyo Tenorshare iCareFone in aad kala soo bixi karto xidhiidhkan iyo inaad isku dayi karto bilaash. Waa codsi wax ka badan ka gudbinta farriimahaaga ka socda macruufka illaa Android, laakiin qodobkan waxa na xiiseynaya ayaa si hufan u ah, sidaa darteed waxaan diiradda saari doonnaa muuqaalkaas.
Sidan ayey kuugu daawanayaan moobilkaaga Android
Marka codsiga laga soo dejiyo kombuyuutarkayaga, waan fulin doonnaa oo waxaan ku xiri doonnaa labada qalab iyada oo loo marayo fiilooyinkooda USB-ga ee Mac ama PC. Waa inaan aqbalnaa dhammaan fariimaha u baahan rukhsadda u muuqata, gaar ahaan aaladda Android halkaasoo lagu rakibi doono barnaamijyada lagama maarmaanka ah. si wax walba ay ugu shaqeeyaan sidii loogu talagalay. Marka wax waliba diyaar yihiin, waxaan usii gudbi doonnaa galida qaybta na daneysa: "Dib u soo celinta iyo soo celinta"
Daaqadda soo socota ayaan doorannaa dhinaca bidix ee bidix ikhtiyaarka "Kaabta iyo soo celinta WhatsApp", iyo xulashooyinka kala duwan ee aan fulin karno ee la xiriira codsiga Fariimaha ayaa soo muuqan doona. Xaaladdan oo kale waxaan dooranaynaa midka koowaad: «Wareejinta farriimaha WhatsApp».
Labadeena qalab ayaa markaa soo muuqan doona, isha xogta bidix iyo qaataha midigta. Faahfaahintani waa muhiim maxaa yeelay waa inaan hubinnaa in la dhigo meesha saxda ah, maadaama qalabka midigta ku yaal, kan heli doona xogta, uu waayi doono dhammaan macluumaadka WhatsApp ee uu haystay si loo soo celiyo midka cusub. Haddii amarku uusan sax ahayn, dhagsii badhanka dhexe «Flip». Marka aan xaqiijinno in aaladda asalka ah ay ku taal dhinaca bidix meesha loo socdana ay tahay midigta, waxaan riixi karnaa badhanka «Transfer».
Waa nidaam qaadanaya dhowr daqiiqo, markaa dulqaado, xitaa haddii aad u maleyneyso in dalabka la xanibay, sug inta uu dhammeysanayo. Marka wareejinta la dhammeeyo, waa inaan tagnaa aaladda aan u socono oo aan raacno talaabooyinka la tilmaamay. WhatsApp ayaa noo muuqan doonta sidii oo aan hadda rakibnay, xitaa waxaan u baahan doonnaa inaan ku xirno lambarka taleefannadeena. Halkaa marka ay marayso waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la soo celiyo xogta ku keydsan xusuusteenna gudaha, sida WhatsApp lafteeda noo sheegi doonto, si dhammaan xogta aan uga soo wareejinnay iPhone-keena loogu wareejiyo Android-ka cusub.
Waa nidaam fudud oo leh dhowr qodob oo muhiim ah oo ay tahay inaan ka taxaddarno inaan lumin macluumaadka, laakiin tilmaamahan ma lahaan doontid dhibaatada ugu yar ee lagu gaaro. IYONatiijada ugu dambeysa waxay tahay inaad kuheli doonto dhamaan fariimahaaga WhatsApp qeybta cusub, inkasta oo ay tahay in la ogaado in aanu qummanayn, maaddaama sheekaysigu u muuqdo mid qasan, oo sheekaysiga aad adigu kaydisay ka dhex muuqan doonaan. Laakiin taasi waxaa lagu xalliyaa daqiiqado yar oo dib loo abaabulo WhatsApp-kaaga, iyo waxa muhiimka ah, oo ah farriimaha, sawirada iyo fiidiyowyada, waxay noqon doonaan lama taabtaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Sida loo wareejiyo wada sheekaysiga WhatsApp ee ka yimaada iPhone illaa Android ama taa beddelkeeda
Xidhiidhada soo dejinta ee ku yaal bogga rasmiga ah ma shaqeeyaan. Xal kasta? Waxaan lajiray madax xanuun iskudayay inaan ku wareejiyo dhamaan WhatsApp-ka iOS-ka illaa Android muddo bil ah.
Ma shaqeyneyso maadaama ay u baahan tahay nooca la bixiyay, haddii kale ikhtiyaarka ah in la mariyo WhatsApp lama awoodo, ma jirtaa qaab kale oo loo sameeyo?
Ma shaqeyneyso, wax walba way hagaagsan yihiin illaa aad siiso wareejinta, halkaas ayaa ay kaa codsaneysaa inaad iibsato, taasi waa, nooca tijaabada runti waxba ma sameeyo. Xal kasta?
Jawaab Jair Aicardo Usme Soto
Kaba sii darane, waxaad iibsataa bandhigga. Dhib malahan, waxaa muhiim ah soo kabashada wada hadalada….
Waxaad raacdaa nidaamka oo dhan …… Muhiim ma aha, dhammaadka waa wanaagsan yahay….
Oo markay dhammeeyaan dib u rakibidda whatsapp ... waxay umuuqataa inaad guuleysan doontid ... laakiin maya.
Adigu waad xaqiijineysaa taleefankaaga, wuxuuna kuu sheegayaa inaad soo ceshato nuqul ... Laakiin u bood bood inaad dib u hesho nuqul ka mid ah Drive-ka ...
Suurtagal ma ahan in dib looga soo ceshto nuqulkii deegaanka meel kasta.
Waxaad u maleyneysaa inaad qalad samaysay oo aad dib u bilowdo ...
Oo waxaad heleysaa WhatsApp, seddex rakib ka dib, si ay kuu xannibaan dhowr saacadood oo aysan kuu oggolaan inaad xaqiijiso lambarka.
Adiguna ma haysatid nuqul ama whatsapp.
Finalka ... ma shaqeynayo shan isku day ka dib. Soo celinta ma muuqato dhamaadka ... ceeb.
Waxaan dareemayaa in la i khiyaaneeyey
Barnaamijku ma bixinayo suurtagalnimada in laga tago Android ilaa iOS, kaliya laga bilaabo iOS illaa Android, markaa cinwaanka tb waa been.
Jawaab Angel VD
Waxaan iibsaday bilo ka hor markii iphonekeyga uu xirmay oo uu doonayay inaan markale u adeegsado wareejinta feylasha, waxay rabtay inaan markale iibsado ...
Ku soo jawaab FAF
ma shaqeyneyso, waxay codsanayaan inay isdiiwaan geliyaan si ay ugu sii socdaan nooca bilaashka ah ugu dambeyntiina wax walba waa inay ku qasbaan iibsashada. Waa been abuur
Ku jawaab eq
Mahadsanid! Waa inaan qiraa markaan aqriyay faallooyinkii hore waan baqay oo waxaan moodayay inay tahay wax isdabamarin, laakiin taasi ma ahayn sidaas, dhamaan fariimahayga, sawiradayda iyo maqalkeyga WhatsApp-ka waa la dhaafiyey, waa la murugooday laakiin wixii aan u baahnaa waa la iga gaadhay
Sidee ku sameysay La wadaag koontada lacag bixinta parfavarts
Waxaan ku weydiinayaa inaad iibsato barnaamijka ...
Xaqiiqdii "demo" uma shaqeynayo wareejinta WhatsApp, barnaamijkuna waa qaali maadaama aan kaliya rabo inaan sameeyo 1 jeer.
Waa inay cadeeyaan oo bilawga ay dhahaan waa barnaamij la bixiyay, mudo, aan lagu bixin "demo". Fiican fiidiyoow iyo mudo, ha iga lumin waqtigayga. Ahhh iyo barnaamijka nacaladda ayaa i dhaafayay, ma siinayo ikhtiyaarka aan ku xiro, waxaan ku qasbay inaan baxo si aan u xiro.
Jawaab R. Fdez
Ku caddee maqaalkaaga in barnaamijka la bixiyay, markaa waan iska ilaalinaynaa rakibiddiisa.
Maqaalka wuxuu si cad u leeyahay "waad ku tijaabin kartaa bilaash" taasna waxay ahayd bishii Janaayo 2018, markii la daabacay. Hada ma garanayo. Sikastaba, waa lagusoo dhaweynayaa.
Bilaash maahan oo si wanaagsan uma shaqeyso marar badan.
Jawaab Arturo Hierro
Ma shaqeyneyso, sidoo kale waxaan qaatay 3 isku day oo waxba ma jiraan. Waxyaabahan ayaa aad kaaga cadhooday aakhirkiina waxaad ku soo gaadhay gabagabadii inaad bixiso. Laakiin waxaad ku dambeysaa inaad doorato codsi kale oo aan aheyn taleefanka Dr, maxaa yeelay waa lagu nacasoobay.
Asun, aakhirkiina codsi noocee ah ayaad ku gaadhay? Mahadsanid.
Ku jawaab Marian
Waxaan u baahanahay inaan ka haajiro whats app chats ka iPhone X ilaa Samsung Galaxy Note 20. Waxaan rabaa inaan ogaado ganacsiga ay ku qabtaan?
Apple waxay bilawday barnaamij dayactir oo bilaash ah oo loogu talagalay dufanka iPad Air 3
Apple waxay ku talineysaa in qaar ka mid ah shaqaalaheeda ay ka shaqeeyaan guriga